Nhau DzeBonde Archives - Page 2 of 12 - Nhau Dzevakuru
Kusvirwa kwandakaitwa nyoro muharare neshamwari yangu! Ndakakura muHarare asi pandakapedza chikoro ndakayenda kunogara kuBotswana for about 3 years chaidzo. Vabereki vangu vainge vakugara kumusha saka time yandaisvika ndainge ndisingakwanise kusvika ndichipfuurira ndokubva ndakutaura naKilla...
Max - January 18, 2019
Kwakange kwapera almost 3 weeks kubva pandakarohwa newonderful dhik yaTicha mukomana wedu webasa apo baba vevana vange vaenda kuHarare kuconference yekubasa. Chaindinetsa ndechekuti ndange ndava kuramba ndichingorota Ticha asina kupfeka achiuya kwandiri nezimboro rake...
Max - January 17, 2019
Ndakasvira sisi vemukadzi wangu mumwe musi vauya kuzosara nevana mukadzi wangu ayenda out nebasa.I was happily married hangu ndine mukadzi akanaka tine mwana one Jack, mumwe musi mukadzi wangu came home akandiudza kuti ainge...
Vakomana zvikoni zvikoni beche haripihwe porridge, ndakarohwa nenyere ndikasvirwa nalandlord wangu! Ndakabatwa nenyere ndokutanga kufunga kurikita beche kwandaiyitwa naCharles boyfriend yangu .Charles aisvira zvekuti unombopedza mazuva usingadi mboro. Beche rangu rakabva ratota ndakatonzwa nepant...
Max - January 16, 2019
Ndakanzi nen’anga ndiuye nehuronyo webenzi ndichibva ndasvirwa naStavo benzi repama shops! Ndakaroorwa at the age of 36 and my hubby was a doctor so was I.Wet met kuStates where we were doing our Medical...
Kusvirwa na pastor ndayenda kuchurch kwavo, ndakabva ndayita born again. Ndini hangu uyo, was invited to a church service ne one of my best friends, Sunday morning ndakamuka and started to get ready and ndayingonzwa...
Max - January 5, 2019